Umaki: amafonti | Martech Zone
Amagama ajwayelekile asetshenziswa abaklami behluzo nezakhiwo zewebhu nokuphrinta.
Isikhathi Esichithwe Kumiphumela Yesipiliyoni Somsebenzisi Ekuthengisweni Okuphakeme
NgoMgqibelo, Agasti 17, 2013 NgoMgqibelo, Agasti 17, 2013 Douglas Karr
Umbiko Wokucwaninga Komsebenzisi We-Econsultancy, owenziwe ngokubambisana ne-WhatUsersDo - ukuhlolwa kokusebenziseka okuku-inthanethi kanye nesiza socwaningo lwesipiliyoni somsebenzisi - kutholakale isibalo impela. Ama-74% wamabhizinisi akholelwa ukuthi isipiliyoni somsebenzisi siyisihluthulelo sokwenza ngcono ukuthengisa, ukuguqulwa nokwethembeka. Kuyini Isipiliyoni Somsebenzisi? Ngokuya nge-Wikipedia: Isipiliyoni somsebenzisi (i-UX) sifaka imizwa yomuntu ngokusebenzisa umkhiqizo othile, uhlelo noma insiza. Okuhlangenwe nakho komsebenzisi kugqamisa izici zokuhlangenwe nakho, ezithintekayo, ezizuzisayo nezibalulekile zokuxhumana komuntu nekhompyutha futhi
Isikhungo Sakho Sucks
NgoLwesine, July 28, 2011 NgoLwesine, July 28, 2011 Douglas Karr
Izolo, ngikhulume eDetroit endlunkulu yenkampani yomhlaba wonke enezinsizakalo eziningi. Isethulo sami besithatha ihora lonke futhi sigxile ekubukeni ama-analytics ngendlela ehlukile… ngifuna ulwazi ababengazi ukuthi lukhona nokuthi luthinte kanjani ibhizinisi labo eliku-inthanethi. Isethulo sinezibuyekezo ezithile ze-rave futhi ngemuva kwamahora amabili, bengingakasuki eDetroit. Ngangihleli futhi ngixoxa nabaholi bezokumaketha abavela kwezinye zezindlela ze-
I-landscape ibukeka kabi kuma-ejensi. Esontweni eledlule, ngiye kwizingcingo ezingekho ngaphansi kwezingu-5 lapho ithemba ebesivele linomhlinzeki wesevisi, bebekhetha umhlinzeki, noma sebenayo i-ejensi. Saqashwa yinkampani eyodwa ukukhuphula izinga labo lenjini yokusesha. Ngemuva kokubukeza isiza sabo ngaphansi komzuzu, ngibazisa ukuthi kuzoba ngumzamo omkhulu ukunikezwa i-CMS yabo yasendulo. Baxhumane ne-ejensi